Inona no ho hita any amin'ny nosy Kreta | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | Fialantsasatra any Eropa, Gresy
La Nosy Kreta toerana tsy maintsy hifindranao hahitanao ireo toerana mahaliana indrindra. Marina fa ny ankamaroan'ny olona dia tonga eto amin'ity nosy Mediterane ity izay voasarik'ireo morontsiraka mahafinaritra sy ny toetrandro mahafinaritra azy, saingy amin'ny nosy dia manana zavatra betsaka kokoa ho hitantsika sy hatao isika noho ny mandany isan'andro amin'ny fasika.
Holazainay aminao ny zavatra ho hita eto amin'ny nosy Kreta mba hahitanao ny ankamaroan'ny dianao mankany amin'ity fako kolontsaina ity. Toerana mitahiry ny sisa tavela amin'ny Kolontsaina Minoana ao amin'ireo tranokala arkeolojika ary manolotra habaka voajanahary tsara tarehy koa, gastronomie matsiro sy tanàna ahazoana mitsidika.
1 Tranonkala arkeolojika Knossos
3 Heraklion sy ny tranombakoka arkeolojika
4 Ny Havoanan'i Samaria
5 Ny nosy Gavdos
6 Ny Loutro mahafinaritra
8 Nosy Spinalonga
Tranonkala arkeolojika Knossos
Raha misy zavatra misolo tena ny nosy Kreta eran'izao tontolo izao dia izany no Lapan'i Knossos, ilay lapa malaza an'ny labirinina an'ny minotaur izay hita tamin'ny taona 1900. kilometatra vitsivitsy miala ny tanànan'i Heraklion izy io ary mahagaga ny fikajiana tsara ny zava-drehetra sy ny fandrosoana an'io sivilizasiona Minoana io, satria manana fantson-drano sy lalana iray aza izy ireo, izay no voalohany amin'ny tantarantsika. Raha tsy misy fisalasalana, toerana tokony hitantsika hianarantsika bebe kokoa momba ny tantaran'ny Eropa izany. Azo atao ihany koa ny mandamina fitsangatsanganana vitsivitsy izay tsara kokoa indraindray satria afaka milaza amintsika ny antsipirian'ny toerana tsirairay izy ireo.
Elafonisi Beach no tsy isalasalana fa ny malaza indrindra ao amin'ny nosy Kreta. Tsy noho ireo tontolon'ny Mediteraneana io ihany, ny toetr'andro tsara sy ny rano mangarahara, fa satria misy a fasika mavokely mahafinaritra tena mampiavaka azy io. Izy io dia ao amin'ny Reserve Reserve Lafonisi, izay ny anarany dia noho ny laphonisis, kristaly mavokely izay manome an'io feo io ho an'ny fasika eny amoron-dranomasina. Izy io no toerana mety hipetrahana mandritra ny andro aorian'ny fitsidihana ny nosy, ny morontsiraka sy ny rano madio ihany no mankafy.
Heraklion sy ny tranombakoka arkeolojika
Heraklion no renivohitr'i Kreta, ary tanàna iray izay tsy tokony halahelo anao amin'ny fitsidihana ny malaza ao aminy Tranombakoka arkeolojika. Ao anatin'io no ahitantsika ireo sombin-tany tany am-boalohany hita tao amin'ny lapan'i Knossos. Tsy mitranga toy ny any amin'ny toerana hafa, fa ny sisa tavela dia hafindra any amin'ny tranombakoka manan-danja any amin'ny firenen-kafa. Eto izy dia nijanona tao amin'ny tranombakoka renivohitra, ka ankoatry ny fitsidihana ny lapa dia afaka mahita ny antsipiriany rehetra voatahiry ao amin'ny tranombakoka isika. Mazava ho azy, tsy maintsy lazaina fa ny ankamaroany dia kopia ho fiarovana azo antoka, fa azontsika atao ny mamantatra ny sary hosodoko sy ireo zavatra tsara tarehy izay tao an-dapa.
Ny Havoanan'i Samaria
Io faritra voajanahary io dia eo anelanelan'ny Tendrombohitra fotsy sy Tendrombohitra Volakias. Io no lemaka lehibe indrindra any Eropa ary toerana mety ho an'ireo te handeha hitsangatsangana any Kreta. Misy làlana izay voatsipy tsara ihany koa, ary mampiseho antsika toerana mahavariana ao amin'ny lava-bato. Mazava ho azy, tsy maintsy tadidintsika fa misokatra ho an'ny besinimaro io eo anelanelan'ny aprily sy oktobra.
Ny nosy Gavdos
Ny nosy Gavdos no toerana atsimo indrindra amin'ny eran'i Eropa rehetra, izay mamorona ampahany amin'ny faritanin'i Selino. Afaka mandeha amin'ny sambo avy any Kreta izy io ary afaka mankafy azy io morontsiraka miboridana, sy Krasti, renivohitra, izay ahitantsika ny arabe kely, ny trano tsara tarehy ary ny toerana izay tsy hanelingelina antsika ny fiara.
Ny Loutro mahafinaritra
Raha ny tadiavintsika dia ny mijanona a tanàna fanjonoana ahazoana aina, matetika ny Mediteraneana, satria manana Loutro isika. Ity tanàna kely ity dia eo anelanelan'ny ranomasina sy ny tendrombohitra kely. Ny tranon'izy ireo fotsy dia misongadina miaraka amina varavarankely manga tsara tarehy, izay mamorona karatra paositra. Ny zavatra tsara indrindra amin'ity toerana ity dia ny tsy ahatongavan'ny fiara ary tsy misy làlana, fa ny fomba fitaterana mahazatra dia amin'ny sambo, izay ahatongavanay hankafy ny torapasika kely sy ny trano fisakafoanana mahafinaritra.
Any Rethymno dia hiatrika ny iray amin'ireo tanàna manan-danja indrindra any Kreta sy toerana tena velona izahay. Raha taorinan'ny morontsiraka sy ny tanàna mangina isika, dia mila mamakivaky ny faritry ny seranan-tsambo, izay ahitantsika bara, trano fisakafoanana ary olona marobe mifaly. Eto amin'ity toerana ity ihany koa isika dia afaka mitsidika ny Fortezza, trano mimanda naorin'ny Venetianina, ka izany no iantsoana azy hoe Venise any Kreta.
Ny nosy Spinalonga dia toa tanàna kely tazana avy eny amin'ny habakabaka, fa ny tena izy dia a toerana tsy onenana amin'izao fotoana izao. Ity nosy ity dia toerana fitsangatsanganana fotsiny ho an'ireo te-hahafantatra trano mimanda tsy mety ritra. Avy amin'ny faritra avo indrindra dia misy fahitana mahafinaritra an'i Elounda Bay. Mba hahatongavana any, afaka mandray sambo any Agios, Nicholaos, Elounda ary Plaka ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Inona no ho hita any amin'ny nosy Kreta